Wararka - MiningMetals Uzbekistan 2022
Shirkaddayadu waxay ka qaybgashay Bandhigga Caalamiga ah ee 16th ee Macdanta, Birta iyo Biraha - MiningMetals Uzbekistan 2022
Laga soo bilaabo Noofambar 3-deedii ilaa 5-teedii, 2021, shirkadeena waxay ka qaybgashay Bandhiga Badeecadaha Dhoofinta Shiinaha ee Shandong (Uzbekistan) 2021 oo ku yaal Bandhigyada Itec (Anhor Park Lokomotiv, Labzad Avenue 12/1) waxayna ahayd guul dhammaystiran.Bandhigga, macaamiishu waxay muujiyeen xiisaha weyn ee alaabadayada waxayna ammaaneen naqshadeynta iyo dareenka sayniska iyo tignoolajiyada alaabadayada.
Waxaa jira qaybiyayaal badan oo maxalli ah iyo soosaarayaal awood leh oo ka qayb qaadanaya bandhigga.Shirkaddayadu waxay ka faa'iidaysanaysaa fursada ah in ay soo bandhigto alaabtayada ugu muhiimsan qalabka qaboojinta degdega ah, khadka wax soo saarka shiilan, dheriga jeermiska, mashiinka baakadaha filimada fidsan iyo fryer vacuum, iwm, macaamiisha cusub.Dhaqanka shirkadaha, si kor loogu qaado caannimada summadayada, iyo in lala socdo xaaladaha suuqa maxalliga ah, baahiyaha, iwm.
Iyada oo loo marayo bandhiggan, shirkadeena waxay ogaatay in warshadaha cuntada ee waddanku ay leeyihiin awood horumarineed oo weyn iyo rajooyin suuqeed oo ballaadhan.Bandhiga, shirkadeena waxay kor u qaaday dhaqanka shirkadaha waxayna soo bandhigtay alaabadayada si macquul ah.Bandhigga, waxaan sidoo kale ka bartay horumarradii ugu dambeeyay ee suuqa, la xiriiray macaamiisha fikradaha farsamada, taabtay macaamiisha suurtagalka ah, iyo kordhinta saamiga suuqa ee qalabkayaga.
Badeecadaha la soo bandhigay wakhtigan ayaa ah dhammaan badeecooyin cusub oo shirkaddu la baxday qaybta hore ee sannadka, kuwaas oo aan kaliya kobcinaynin silsiladda alaabta ee jirta, laakiin sidoo kale waxay si weyn u kordhisaa tartanka dhamaystiran ee alaabta.Alaabooyinku waa kuwa cusub, oo ay ka buuxaan dareenka sayniska iyo tignoolajiyada, iyo farshaxannimo heersare ah.Aqoonsi wadajir ah iyo ammaan ka soo bandhigidda macaamiisha.
Madasha bandhiga ayaa waxaa isugu yimid shirkado wax soo saar oo kala duwan oo ka kala yimid gobolada dalka, taasi oo ka tarjumaysa horumarka xawliga ah ee ku socda warshadaha wax soo saarka dalkayga.Mashiinnadayada INCHOI waxay sii wadi doonaan inay hagaajiyaan tayada wax soo saarka iyo adeegga iibka ka dib mustaqbalka iyadoo ku saleysan mabda'a horumar waara.
Iyada oo loo marayo bandhiggan, shirkadeena waxay kasbatay wax badan.Waxaan sii wadi doonaa inaan si adag u shaqeyno si aan dad badan u ogeysiino sumaddayada INCHOI oo aan siino macaamiisha qalab tayo sare leh.